आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (१७ जेष्ठ २०७८ सोमबार, ३१ मे २०२१) – BUSINESSPANA.COM
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (१७ जेष्ठ २०७८ सोमबार, ३१ मे २०२१)
श्रीशाके १९४३ नेपाल सं. ११४१ राक्षस नामक सम्वत्सर ग्रीष्म ऋतु वि.सं. २०७८ ज्येष्ठ १७ गते तद्अनुसार सन् २०२१ मे ३१ तारिख सोमबार ज्येष्ठ कृष्णपक्ष पञ्चमी तिथि ७ः१८ पर षष्ठी तिथि श्रवण नक्षत्र ब्रम्हा योग गर करण आनन्दादिमा सिद्धि योग चन्द्रमा मकर राशिमा भ्रमणशील रहनेछ । काठमाडौमा सूर्योदय बिहान ५ः११ मा र सूर्यास्त साँझ १८ः५३ बजे हुनेछ । धुम्रपानरहित दिवस ।
मेष – समय शुभ फलदायक रहनेछ । नयाँ काम आरम्भ गर्नु हितकर रहनेछ । आफन्तको सहयोग प्राप्त हुनेछ । यश वर्चश्व बढ्ला । आँट उत्साह बढ्नेछ । कार्य क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । बौद्धिक, रचनात्मक, कलात्मक, साहित्य, संगीत आदिसित सम्बन्धित काममा सफलता मिल्नेछ । असल भावनाले युक्त कार्य शुभ र सफलतादायक रहनेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । धनसम्पत्ति बढ्नेछ । ख्याति फैलिनेछ । हांसविलासमा आकर्षण बढ्नेछ । सार्वजनिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । उच्चाधिकारीको सहयोग मिल्नेछ ।
बृष – शुभ समय छ । मान महत्व कम हुने छैन । बढी परिश्रमले काम बन्नेछ । आफन्तको सहयोग पाउनुहुनेछ । समस्याको समाधान मिल्नेछ । रोकिएको काम बन्ला । नियमकानुन तोड्नु उचित हुनेछैन । सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त हुनेछ ।
मिथुन – मिश्रित समय छ । व्यस्तता बढ्नेछ । खेलकुद र भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । पढाइलेखाइमा रुचि बढाउनु पर्ला । लेखन प्रकाशनसित सम्बन्धित काममा सफलता मिल्नेछ । परिश्रमले सफलता पाउनु हुनेछ । जोखिममा नपर्नु उचित होला । विलासप्रति रुचि बढ्नेछ ।
कर्कट – मिठो भोजन प्राप्त हुनेछ । प्रेममा सफलता प्राप्त हुनेछ । इष्टमित्रको साथ प्राप्त हुनेछ र सन्तानसुख मिल्नेछ । आयस्रोत बढ्नेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्ला । सुख–सुविधाको वस्तु बढ्नेछ । सभा–समारोहमा मान पुरस्कार मिल्नेछ । गौरव बढ्ला । रोकिएको काम बन्नुको साथै लगानी लगाइएको धन उठ्ला । धन सम्पत्ति बढ्नेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ । जीवनसाथीको साथ मिल्नेछ ।
तुला – समय जोखिमपूर्ण कार्यमा रुचि प्रदायक रहला,तर सद्कार्यमा लाग्दा नै शुभ रहला । अरुको भर नपर्दा शुभ होला । ठगी विश्वासघातदेखि सचेत रहनु पर्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । गोप्य काम बन्नेछ । जोखिम बढ्न सक्छ । ख्याति फैलिनेछ । आरोग्यतामा ध्यान दिनुपर्नेछ । विवादमा नपर्नु हितकर रहला ।
मकर – उन्नति पदोन्नति होला । बिघ्न हट्ला । कर्मयोगी रहनु हुनेछ तर अरुको भरमा नबसेमा राम्रो रहला । प्रयासरत काम बन्नेछ । यश वर्चश्व बृद्धि हुनेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । मनोकूलको काम बनेर मन प्रशन्न भैहाल्नेछ । विजयश्री प्राप्त होला । आरोग्यता बढ्ला । कलात्मक र रचनात्मक क्षेत्रसित सम्बन्धित काममा सफलता भेट्ला । इष्टमित्र एवम् सन्तानको सहयोग मिल्नेछ ।
Previous: विद्युत् खपत बढाउन घट्यो इन्डक्सनको भन्सार महसुल
Next: आजदेखि मेरो माइक्रोफाइनान्सको संस्थापक शेयर लिलामीमा